Iindlela eziNtandathu onokuHlaziya ngazo iiNtsebenzo ze-SEO kwaye usebenzise olo Lwazi ukuze ubeke inqanaba eliphezulu kuGoogle
Ngeziphumo zokuqala ezintlanu zokuyalela eziphantse zibe ngama-70 eepesenti zokucofa kukaGoogle. Kuyimfuneko ukuba ube nokuqonda okubanzi kohlalutyo lwe-SEO. Ngelixa usebenzisa izixhobo zikaSemalt kuzokukunceda ukuba ufike apho, kubalulekile ukwazi ukuba ujonga ntoni kwaye kukunceda njani.
Apha ngezantsi, siza kudlula izinto ezintandathu onokuzisebenzisa ekuqondeni i-SEO. Ngokuqonda isihloko, unokutyhala iwebhusayithi yakho ukuya kwinqanaba apho ukuxhomekeka kwayo kuya kunceda khona. Ayiloluhlu olubandakanya konke, kodwa iya kukunika ukuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela onokuqala ngayo.
Jonga izihloko zakho.
Guqula iinkcazo zakho ze-meta.
Jonga umxholo wokhuphiswano lwakho.
Jonga amagama aphambili owasebenzisayo.
Sebenzisa uhlaziyo lwewebhusayithi yeSemalt simahla.
Tyala imali kwiPhulo le-SEO.
Jonga izihloko zakho
Ukususela kwiintsuku zokuqala zokuveliswa komxholo, iindaba eziphambili zihlala zigcinwe kwinqanaba eliphezulu. Sebenzisa izihloko zakho ze- H2 kunye ne- H3 ngokufanelekileyo kubonelela ngendlela efundekayo ngokwemvelo. Chitha kwiindawo ezifanelekileyo ukuqinisekisa ukufundeka. Le nkqubo iya kukhuthaza abafundi ukuba bahlale, yenza indawo yewebhusayithi iphakame kwiinjini zokukhangela.
Le ndlela iyodwa ayisayi kuba nefuthe elininzi ngqo kwi-SEO yakho. Kodwa xa udibanisa oku kunye namagama aphambili, abafundi baya kuba nako ukukufumana kwaye banamathele. Kusenokwenzeka ukuba uqhubeke ujonge iwebhusayithi ukuba kulula ukuyifunda.
Xa uguqula iintloko zakho, zama ukucinga ngebhlog yakho njenge ncwadi. I-H1 kufuneka ibe sisihloko sakho, kwaye kufuneka yazise abafundi ukuba bafuna ntoni. Ngomhlathana, ndineengcebiso ezimbini.
Inketho yokuqala yokongezwa kwesihlokwana sakho njengengxelo yenzuzo efakwe esiphelweni senqaku lakho. Okwesibini kukubonelela ngentshayelelo elandelwa sisiqwengana esineenkcazo ezineenkcukacha zesihloko. Okwesibini kukwenza lula ukuba umfundi afake umbono lo gama ukhetho lokuqala lufika kwinqanaba. Akukho ndlela ilungileyo yokwenza oku, ngoko dlala ujikeleze de ufumane into esebenzayo.
Guqula iinkcazo zeMeta yakho
Enye yezona ndawo zingasetyenziswanga kwiwebhusayithi yakho kusenokwenzeka ukuba yinkcazo yemeta. Abantu abaninzi abazi ukuba inkcazo ye-meta ikwiphepha ngalinye. Ngokwenza oku, unethuba eliphezulu lephepha elinye okanye amanqaku amanqaku.
Eli phepha liza kukhokelela abantu kwezinye iinxalenye zewebhusayithi yakho, apho banokuthi baxhamle kwiinkonzo zakho. Kwi-google, inkcazo ye-meta ingezantsi kwekhonkco lekhasi lokukhangela iphepha. Jonga ngezantsi umzekelo womfanekiso.
Ukususela kwimbono ye-SEO, ukubeka amagama aphambili kwinkcazo ye-meta yeyona ndlela ilungileyo yokubeka kwiinjini zokukhangela. Nokuba amagama kule nkcazo ayincedi i-SEO yakho, iya kunika umfundi umbono wento aza kuyilindela ngaphambi kokuyicofa. Ukungabi nenkcazo ye-meta lithuba elilahlekileyo.
Xa usenza iinkcazo zemeta yakho, zama ukugcina izinto zimfutshane kwaye zithe ngqo. Yiba nomnxeba oya kwisenzo (CTA) uxelela abantu ukuba mabenze ntoni ngaphakathi kwale nkcazo. Indlela eqhelekileyo ukuyigcina ingezantsi kwamagama ayi-150.
Jonga umxholo wabaCwangcisi bakho
Cinga ngamagama aphambili, imixholo kunye nefomathi xa ujonga umxholo wabo. Imbono kukungabi kwifom yabo. Injongo yakho kufuneka kuphuculwe kwimixholo yabo.
Umzekelo, ukuba ungummeli wentengiso odala umxholo wenkampani encinci yezihlangu, uya kufuna ukuqaphela into eyenziwa ngabantu abakwimeko yakho. Uya kufuna ukwenza umxholo oqinisekileyo kubaphulaphuli bakho ekujolise kubo. Umzekelo, iZappos ijolise kubantu abadala abancinci abagxininisa isitayile kunye nomgangatho.
Ukuba inkampani yakho yezihlangu ifuna ukukhuphisana, injongo yokugqibela iya kuba kukufumana inkampani efana neZappos. Nangona kunjalo, xa uqalisa, kufuneka ufumane ezinye iinkampani ezenza into efanayo nawe kwaye uvelise umxholo ophucukileyo kulokho sele kuhleliwe. Umzekelo, ukuba izicathulo eziphakamileyo eziphezulu zibuyele kwisitayile, uya kufuna ukujolisa igama eliphambili "lesihlangu esiphakamileyo".
Ungabhala amanqaku aliqela ahambelana nomxholo obandakanya imiyalelo yendlela yokucoca ngokuchanekileyo, ibhulukhwe ehamba nayo, ihempe ezihamba nazo, kunye nendlela yokwenza ukuba ihlale ngonaphakade. Ukuba nobabini nenza uluhlu lweposi, injongo yenu iya kuba kukwenza izihloko kunye nomxholo ophume phambili wazo. Ukuba ujonga ubungakanani, iimfuno zabo ezintathu zilingana nesithandathu sakho.
Jonga amagama aphambili owasebenzisayo
Esi sihloko siyinto yokwandiswa kweposi yethu yangaphambili, kodwa amagama angalunganga kwisihloko sakho kunye nomxholo unokutsala isihlwele esingalunganga. Usebenzisa lo mzekelo ngaphambili, ukuba uvelisa iibhloko ezijolise kuzo izihlangu, awufuni mntu okhangela ihempe. Ukuthambeka kwegama eliphambili "i-polyester ethambileyo" ayizukuyinceda kakhulu inkampani yakho yezihlangu.
Kwakhona, amagama aphambili owasebenzisayo anokukhuphisana kakhulu. Kwiinkampani ezincinci, banokufuna ukujolisa amagama angachaphazeleka angachaphazeleki kangako. Akuncedi ukuzama kunye nokubeka "izicathulo ezintsha" xa ezinye iinkampani ezingama-300 zamawaka zifuna ukwenza into enye. Uninzi lweenkampani ezingezantsi zaziwa, ziimpawu ezithembakeleyo.
Umkhwa ombi endidla ngokuwabona kule mihla "kukuphawula amagama aphambili." Ukugxininiswa kwamagama aphambili kuzama ukugcama njengamagama amaninzi akhangelekayo kwiblogi ukwenza inqanaba lenjini kaGoogle. Ingxaki ngesi sicwangciso kukuba iAI kaGoogle iyawuqonda lo mbandela. Abo bazama ukugaxwa kwegama eliphambili abanakubekwa kwinqanaba eliphezulu.
Ukufumana uluvo oluhle ngokubanzi malunga nendlela asebenza ngayo amagama, unokusebenzisa nje u-google. Ngokukhangela ikota ocinga ukuba iya kuzisa abantu kwiwebhusayithi yakho, unokufumana amanye amanqanaba eiwebhusayithi ngeli gama. Ukuba ezo webhusayithi zenzeka kwi-niche yakho, ke unegama elingundoqo. Ngokongeza izinto kwigama elingundoqo, unokunciphisa umxholo.
Sebenzisa i-Semalt's Website yokuHlaziya
Iiwebhusayithi, kuphuhliso lokuqala, ngokwemvelo zinemicimbi eyahlukeneyo eyahlukeneyo. Banokuba namakhonkco aphukileyo, ukugqithiswa okuninzi kakhulu, ukusebenza kakubi, kwaye bacothise ukulayisha. Ukuhlaziywa kweWebhusayithi yeSemalt yasimahla kufuna ukufumanisa le micimbi.
Isixhobo sokuHlaziya iwebhusayithi Okweli nqaku, akufuneki uhlawule ukufumana umbono wokuba iwebhusayithi yakho ime phi. Nangona kunjalo, abo bangengobasebenzi kufuneka baqwalasele umkhankaso we-SEO.
Ngesixhobo esifanelekileyo sohlalutyo, uya kukwazi ukuqonda ukuba kukuthini ngokuchofoza kwiwebhusayithi yakho kubangela ukuguqulwa kwaye ngawaphi amagama aphambili anyusa ukugcwala kwindawo yakho. Ngelixa zombini ziluncedo ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, ukuba injongo yakho ye-SEO yokukhankasa kukunyusa ukuthengisa, awufuni igama elingundoqo elinomdla kubakhenkethi. Lo mbono usizisa kwisihloko sethu esilandelayo, ukhetha ukutyala imali kwiphulo eliza kukunceda ukhule.
Tyala imali kwiPhulo le-SEO
Kukho iintlobo ngeentlobo zezixhobo ezikhoyo apha ezingakunceda ufunde iziseko ze-SEO . Kodwa iiyure ezingenakubalwa ezinokuthatha uphando ngesihloko zinokuba nzima. Kuyinyani ngakumbi ukuba uneshishini elincinci ekufuneka ujonge abathengi. Awunakugxila ekwenzeni ukuthengisa ukuba uchitha elo xesha uphanda ngendlela iwebhusayithi yakho enokuma ngayo.
Ngokudibanisa ulwazi lwakho lwesihloko kunye neqela leengcali zikaSemalt, uya kukwazi ukubona indlela ngqo eya empumelelweni. Kananjalo olu lwazi lunokukunceda ugcine isibonelelo osinikezwe nguSemalt. Umsebenzi wethu uyeza ukuba uqinisekise ukuba amagama aphambili owakhethayo aphumela kwinkqubo yokusebenza. Ewe, amaphulo ethu eze namagama aphakanyisiweyo acetyiswayo.
Unokukhetha phakathi kwemikhankaso emininzi kuxhomekeke kubungakanani bewebhusayithi yakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Qiniseka ukuba ujonga kwakhona iinkcukacha ze- AutoSEO kunye ne- FullSEO ukuqinisekisa ukuba siyazifezekisa iimfuno zakho. Unikezwe ubungakanani kunye nezibalo zewebhusayithi yakho, iqela leengcali zikaSemalt zilungele ukukunceda ukuba uthathe isigqibo esifanelekileyo sezemali.
Ukuqonda indlela yokuhlalutya i-SEO kunokukunceda njani ufikelele kuPhezulu kuGoogle
Ngokuqonda ngokuqinileyo ukuhlalutya i-SEO, uya kuba nako ukuzinika isandla uphakamise isikhundla phezulu kwi-google. Ngokuqinisekileyo, umxholo ofanelekileyo kunye nokufundwayo kubalulekile kule. Izihloko ezifanelekileyo ngamagama aphambili anokuncedisa i-SEO yakho kodwa qinisekisa ukuba umfundi angalandela kunye.
Kwakhona, ukuqonda ukusetyenziswa kwenkcazo ye-meta kuya kukunceda ekuziseni abo banokuthandabuza iwebhusayithi yakho. Ngokubonelela nge-CTA kwinkcazo yemeta, baya kuyazi into abanokuyilindela kwinqaku lakho. Abafundi baphefumlelwe abo banentembelo yendalo kumazwi abo.
Amagama aphambili afanelekile njengokufundeka xa kuziwa kwi-SEO. Ngokusebenzisa izixhobo zikaSemalt zokuhlaziya simahla, unokufumana umbono olungileyo wokuba uqale phi. Ngokwandisa oku kubandakanya iphulo le-SEO, unokuguqula oku kuqonda ube ziziphumo ezinokulinganiswa. Ngolwazi oluthe kratya ngezi zixhobo, yenza iakhawunti namhlanje.